FacturaScripts dia nohavaozina ho an'ny 2018 | Avy amin'ny Linux
FacturaScripts dia nohavaozina ho an'ny 2018
Tamin'ny taon-dasa dia nilaza taminay ny mahasoa ny InvoiceScripts: faktiora sy kaonty amin'ny rindrambaiko maimaimpoana, ERP sy CRM misy pototra mahavariana izay niavaka noho ny fampiasana azy mora sy ny hafainganana azo ampifanarahana sy ampiharina amin'ny karazana orinasa, ankehitriny dia mitombo hatrany ny FacturaScripts, mitondra fiasa vaovao ho an'ireo mpampiasa azy ary manitatra ny fanohanany. Ity fitomboana haingana ity dia nitondra ny filàna fanatsarana ny rindrambaiko avy ao am-pony mba ho azo ovaina kokoa rehefa mandeha ny fotoana ary mifanaraka amin'ny haitao ankehitriny, ka izany no antony namoronana azy Carlos Garcia (NeoRazorX) milaza amintsika voalohany hoe nanao ahoana izany Famerenana indray ny FacturaScripts ho an'ny taona 2018.
1 Manamboatra endrika vaovao momba ny InvoiceScripts ho an'ny 2018 an'ny NeoRazorX
2 Fanamarihana momba ny FacturaScripts 2018
Manamboatra endrika vaovao momba ny InvoiceScripts ho an'ny 2018 an'ny NeoRazorX
Mandritra ny fahavaratra, miaraka amin'ny fisintomana maherin'ny 60.000, fametrahana 12.000 izay havaozina isam-bolana, mpampiasa 4.000 voasoratra anarana ao amin'ny tranonkala ary plugins 90, dia miatrika fotoana fitoniana kely izay tianay hararaotina izahay amboary ny olan'ny famolavolana fototra ao amin'ny FacturaScripts: olan'ny fiankinan-doha, tsy fahaizana mandova eo amin'ny mpanara-maso na ny fomba fijery, ary ny kaody goavambe goavambe, ny vokatr'ireo taona fampandrosoana.
Fotoana izao handinihana indray ny zava-drehetra. Mianara amin'ny lesoka sy ny fahombiazana, ary manangana fototra vaovao mandritra ny taona vitsivitsy. Raha tsy izany dia ho faty amin'ny fahombiazana isika, satria mila ezaka bebe kokoa ny fanampiana endri-javatra vaovao.
Teo ambanin'ireo toerana ireo dia nanomboka prototype kernel niaraka tamin'ny mpamoron-kira sy ny sasany amin'ireo singa symfony izahay. Composer ahafahantsika manampy sy mitantana fiankinan-doha amin'ny PHP mora foana, ary mahazo tombony amin'ny famoahana mandeha ho azy ny kilasy ilaina. ny symfony misafidy isika httpfoundation, mba hitantanana tsara ny fampidirana sy ny fivoahan'ny angona, mpandika teny hanova ny FacturaScripts ho fiteny maro, mpandefa hetsika hitantana hetsika ary javatra, motera modely misy lova izany raiki-pitia isika.
Amin'ity fototra ity dia manomboka manangana karazan-mpanaraha-maso maharitra 3: ListControllers, ho an'ny lisitra, EditControllers, ho an'ny modely tsotra, ary PanelControllers, ho an'ny modely sarotra kokoa izay misy fifandraisana amin'ny maodely hafa. Ohatra, ny mpanjifa, rehefa manova mpanjifa ianao dia te-hahita ny adiresy, ny kaonty amin'ny banky, ny faktiora farany, sns ...
Ny interface FacturaScripts dia efa intuitive, ary iray amin'ireo ampahany sarobidy indrindra amin'ny mpampiasa, izay nolanjainay dia ilay kaody. Ny mpanara-maso maharitra dia zavatra ilaintsika nandritra ny fotoana ela mba hampiasa indray ny kaody ary hanampy mora kokoa ireo fiasa vaovao.
Raha mpamorona ianao dia matetika no mahita ny tenanao ao anatin'ny toe-javatra mino fa mahafinaritra ny kaody anao, ary volana vitsivitsy taty aoriana dia tsapanao ny maha ratsy azy. Ara-dalàna izany. Soa ihany izao fa misy fitaovana sy serivisy, toy ny scrutinizer-ci, izay ahafahanao mahazo tombana amin'ny tanjona voafaritra kokoa ny kaodinao, ankoatra ny fanondroana ireo lesoka iraisana sy fanomezana torohevitra.
Alohan'ny hanombohana ny prototype dia nanapa-kevitra ny hamerina hijery ny kaody miaraka amin'ny scrutinizer-ci izahay, hahazoana isa 5.4, satria ny kilasy fs_controller no tompon'andraikitra lehibe, na dia tsy izy irery aza. Ary tsy misy vintana firy amin'ny fanatsarana ny famolavolana nefa tsy manapaka ny mifanentana. Antony maro kokoa hanombohana fototra vaovao.
amin'izao fotoana izao, Ny isa FacturaScripts 2018 dia 8.66, manana miavaka amin'ny ankamaroan'ny kilasy sy ny fombany.
Ny endrika tsara kokoa dia namela anay hanisy safidy vaovao amin'ny endrika rehetra, toy ny fanondranana PDF na Excel amin'ny pejy na lisitra rehetra, ary ny motera fikarohana mega, izay hamonjy fotoana be mpampiasa rehetra.
Ankehitriny dia mijanona fotsiny izy hamita asa vitsivitsy ary manomboka ny beta sy ny fanavaozana ny plugin. Hampahafantatra anao izahay ;-).
Fanamarihana momba ny FacturaScripts 2018
Raha misy zavatra tiantsika, dia ny mahita fa mahomby ireo fitaovana loharano misokatra izay natao ho fitomboan'ny orinasa ihany koa, asa mafy izay matetika mandeha ambanin'ny latabatra, azoko antoka fa tsy izany no izy satria ny fahafaham-pon'ny mpampiasa ankehitriny ampiasain'izy ireo ity fitaovana ity dia avo dia avo.
Ny fitomboan'ny fahasarotana sy ny fiasan'ny fitaovana satria mitaky fanamby ara-teknika somary lehibe, matetika ny fampiharana dia tsy vonona ny hitombo loatra na ny mpamorona azy ireo dia mifantoka fotsiny amin'ny fitazonana ireo rafitra taloha izay tsy mifanaraka amin'ny teknolojia vaovao, heveriko fa Ny teboka tena ilaina amin'ny FacturaScripts dia ny fahazavany hijerena ny rindrambaiko sy ny fanetren-tena hahafantarana ny fotoana tokony hanaovana fanovana.
Miaraka amin'ity kinova vaovao ity, ankoatry ny fahombiazany kokoa, ny FacturaScripts dia hitondra fampiasa vaovao izay mifandray akaiky amin'ny filan'ny fikambanana ankehitriny, mino izahay fa ity dia ho endrika mahomby ihany koa ary ireo mpampiasa an'ity ERP mahery ity dia afaka hitombo ny orinasa ataon'izy ireo amin'ny fomba tsara kokoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » FacturaScripts dia nohavaozina ho an'ny 2018
Andao atomboka ny fandaharana amin'ny taona
Sakano, tantano ary tahirizo ireo antontan-taratasy amin'ny Open-paperless